IParis ngowona masipala unabemi abaninzi kunye nekomkhulu laseFrance.
Ime embindini wolwandle olukhulu olunomhlaba ochumileyo kunye nemozulu epholileyo, isitya saseParis, kumjikelo weSeine, phakathi kokuhlangana kwayo neMarne neOise. IParis ikwalikomkhulu lommandla wase-Île-de-France kunye neziko lemetropolis ye-Greater Paris, eyenziwe ngo-2016. Yahlulwe yangamacandelo, njengezixeko zaseLyon naseMarseille, ezingamashumi amabini. Kulawulo, ukusukela nge-1 kaJanuwari, i-2019, isixeko esi siye saba kukudibana kunye nenqanaba elikhethekileyo elibizwa ngokuba "sisiXeko saseParis" (ngaphambili, yayingumasipala kunye nesebe). Urhulumente unamalungelo athile apho amapolisa asebenza eParis. Isixeko sineenguqu ezinzulu phantsi kobukumkani besibini kumashumi eminyaka ye-1850 kunye ne-1860 ngemisebenzi emikhulu ebandakanya ikakhulu ulwakhiwo lweendlela, izikwere kunye negadi kunye nolwakhiwo lwezakhiwo ezininzi, eziyalelwe nguBaron Haussmann, enika I-medieval eParis yobuso esibaziyo namhlanje.
Isixeko saseParis sasinabemi abazizigidi eziyi-2,187 nge-1 Januwari 2020. Abemi baso babizwa ngokuba ngamaParis. Umdibaniso weParis ukhule kakhulu ngekhulu lamashumi amabini, edibanisa abemi abazizigidi ezili-10.73 nge-1 Januwari 2020, kunye nommandla wasezidolophini (umanyano kunye ne-peri-urban ring) babalelwa kwizigidi ezili-12.78. Umdibaniso weParis ngowona unabantu abaninzi eFrance, ungowesithathu kwilizwekazi laseYurophu kwaye ngowama-32nd uninzi lwabantu ehlabathini ngoJanuwari 1, 2019.
Indawo yokuma kweLutèce, kwesi siqithi namhlanje kuthiwa yi-Ile de la Cité, ivumela ukuwela komlambo omkhulu ohamba inqanawa onguSeine ngendlela edibanisa uMantla kunye noMazantsi eGauls, eneneni ukusukela kwantlandlolo isixeko esibalulekileyo, ikomkhulu leParisisi, emva koko indawo yokuhlala yomlawuli waseRoma. Isikhundla saso kumbindi wommandla olawulwa ngookumkani baseFrank senza ukuba sikhethe njengekomkhulu laseFrance endaweni yeTournai. Ifunyanwa embindini womhlaba ochumileyo wezolimo onemozulu efumileyo nefumileyo, iParis yaba sesinye sezona zixeko ziphambili eFrance ngenkulungwane yeshumi, kunye namabhotwe asebukhosini, iizindlu ezityebileyo kunye necawa enkulu. Ngexesha leshumi elinambini, kunye neYunivesithi yaseParis, isixeko saba lelinye lamaziko okuqala eYurophu kwezemfundo nakwezobugcisa. Amandla asebukhosini amiselwe kwesi sixeko, ukubaluleka kwezoqoqosho nezopolitiko akupheli ukukhula. Ke, ekuqaleni kwenkulungwane yeshumi elinesine, iParis yayisesinye sezona zixeko zibalulekileyo kwilizwe lamaKristu. Ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe, yayilikomkhulu lelona gunya liphambili kwezopolitiko zaseYurophu; ngenkulungwane ye-18, lelinye lamaziko enkcubeko amakhulu eYurophu; Kwaye ngenkulungwane yeshumi elinesithoba, ikomkhulu lobugcisa kunye nolonwabo. Ukusuka kwinkulungwane ye-16 ukuya kwinkulungwane yama-20, iParis yayilikomkhulu loBukhosi bamaKoloniyali baseFrance. IParis ke ngoko idlale indima ekhokelayo kwimbali yeYurophu kunye nehlabathi kangangeenkulungwane.
IParis ifanekisela inkcubeko yaseFrance. Kwi-2017 yabekwa njengeyona dolophu intle kwihlabathi. Igama lesiXeko sokuKhanya, likhaya kwizikhumbuzo ezininzi kwaye sesinye sezona zixeko zityelelweyo emhlabeni. Likhaya kwelona ziko lobugcisa likhulu kwaye lityelelwe kakhulu emhlabeni. IParis likomkhulu lokunethezeka lehlabathi. Amaqela ehlabathi lokuqala nelesithathu anekomkhulu lawo eParis. Phakathi kweemveliso ezixabisekileyo emhlabeni, iimveliso zaseFrance zezona zidumileyo njenge-haute couture ( haute couture ) , ubucwebe obuhle ( boite a bijoux ) kunye ne-gastronomy. IParis sesona sixeko sineyona ndawo inabantu abaninzi kwihlabathi kwi-2018. Phakathi kweempawu zexabiso eliphambili kwihlabathi, iimveliso zaseFrance zezona zininzi kwaye ezintathu zokuqala zivela eParis. IParis sisixeko esinamabhotwe amaninzi emhlabeni kwi2018. EParis, eyona veki idumileyo yamazwe aphesheya yenzeka minyaka le. Kukule dolophu apho ii-couturiers ezidumileyo kwihlabathi kunye neempawu ezithile zodidi lwaseFrance zaziwa kwihlabathi liphela. Kwicandelo le-cuisine ye-haute (Grande Cuisine) , iParis sisixeko esineyona ndawo yokutyela ibalaseleyo emhlabeni. Ikomkhulu laseFrance liphihlwe esinye isixeko, iRoma, esisebenza nakwelinye icala, ngesiqubulo esithi "YiParis kuphela efanele iRoma, yiRoma kuphela efanele iParis".
Last edited on 22 EyoMqungu 2022, at 22:17
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-22 EyoMqungu 2022, kwi-22:17